नवराज सिलवाललाई आइजीपी नबनाउने सत्तापक्षको अडान - SangaloKhabar
प्रश्न- 'प्रहरीको सरुवा बढुवा सरकारले गर्ने कि अदालतले ?'
काठमाडौं । सरकारले तत्काल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा कसैलाई नियुक्त नगर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाइसकेका कारण तत्काल आइजीपी नियुक्त गर्न नमिल्ने बताइएको छ । यसका साथै सत्तापक्षका नेताहरु अदालतले कार्यपालिकामाथि अनुचित हस्तक्षेप भएको निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकको चयन कार्यपालिकाको अधिकारको विषय हो, नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक छानिन्छ’ सरकारमा सहभागी एक नेताले भने, ‘नियमावली कार्यपालिकाले आफैं बनाउँछ र यसलाई फेर्न पनि सक्छ, यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
सिलवालको ट्वीटः रत्नको हृदयघात
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउन परमादेश दिएका ‘बरिष्ठतम डीआइजी’ नवराज सिलवालले बिहीवार साँझ ट्वीट गरे- जिन्दगी र संघर्ष अब त एकअर्काका परिपूरक भएजस्तो लाग्छ । एकपछि अर्को मोर्चाबन्दी..।
सिलवालको ट्वीट त्यतिबेला पोष्ट भयो, जतिबेला सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिलवाललाई कुनै पनि हालतमा आइजीपी नियुक्त नगर्न गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई दबाव दिएको सूचना सरकारी च्यानलबाटै बाहिर आइरहेको थियो ।
सिलवालको निराशाजनक ट्वीट पढेपछि प्रहरी हेडक्वार्टरका केही उच्च अधिकृतहरुले २३ वर्षअघिको दुःखद घटना स्मरण गरे, जुन घटनामा पनि शेरबहादुर देउवा जोडिएका थिए । तत्कालीन आइजीपी रत्नशमसेर थापालाई तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर आइजीपीबाट हटाएकै दिन उनको हृदयघातबाट मृत्यु भएको थियो ।
तत्कालीन आइजीपी थापाले आफ्ना छोराको बिहे भोलिपल्ट भएकाले हेडक्वार्टरमा एकै दिन भए पनि बस्न पाउँ भनेका थिए । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री देउवा र उनले आइजीपी बनाएका मोतिलाल बोहोराले एक रात पनि थापालाई हेडक्वार्टरमा बस्न दिएनन् । उनका विदेशी पाहुना समेत बिहेका लागि आइसकेका बेला भएको सो अप्रत्याशित घटना व्यहोर्न नसकेर थापालाई हृदयाघात भयो ।
डेढ महिनादेखिको आइजीपी विवादका कारण नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । माथिको बढुवा रोकिएपछि तलको स्वतः रोकिएको छ । माथिको विवादकै कारण कतिपय अधिकृत र जुनियर स्टाफहरु ब्ाढुवा नपाई अवकाश हुनुपर्ने अवस्था समेत रहेकाले जो भए पनि जाँडा टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको गुनासो छ ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नवराज सिलवाल आइजीपी हुँदा एक नम्बर एआइजी प्रकाश अर्याल हुनेछन् भने दुई नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी र ३ नम्बर एआइजीमा जयवहादुर चन्द हुनेछन् । सातैजना एआइजी राखियो भने अन्य चार डीआइजीले पनि एआइजी हुने अवसर पाउनेछन् ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीका २९ जना डीआइजीमध्ये हाल १७ जना खाली रहेको अवस्था छ । त्यो ठाउँमा १७ जना एसएसएपीहरु ब्ाढुवा पर्खिएर बसेका छन् । यही हिसाबले जति तल गयो, त्यति नै धेरै अधिकृतहरुको वृत्ति विकास रोकिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
पछिल्लो पटक नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाइल र सजायँ तथा पुरस्कारका रेकर्डहरु समेत गृहमन्त्रालयमा तानिएको छ ।
स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी तदर्थ अवस्थामा चलिरहेको छ । फौजी संगठन चिकित्सकले चलाउनु परेको छ । आइजीपीका दाबेदार डीआइजीहरुबीच मै बोलचाल छैन । उनीहरु राजनीतिक दल र अदालत धाउँदै हिँड्दा समग्र संगठनमा अराजकताको अवस्था रहेको हेडक्वार्टरका एक अधिकारीले बताएको अनलाइनखबरमा समाचार छ ।
नेपालीमा एउटा उक्ति छ- ८ र १२ फाप्दैन । सर्वोच्च अदालत र राजनीतिक दलको सन्दर्भमा यी दुई दिन दोहोरिएका छन् । ०५२ साल भदौ १२ गते सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको बहुमतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधी निर्वाचन घोषणालाई बदर गर्‍यो ।
देउवाले अदालतको परमादेशले आफ्ना उम्मेदवार जयवहादुर चन्द आइजीपी बन्ने बाटो बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट प्रहरी नियमावलीनै फेर्न दबाब दिएका छन् । अदालतको आदेश तत्काल पालना गर्न बाध्यकारी सरकार अब के गर्छ ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ समय: १४:१०:३१